About Sumy Agrarian National University - Study in Ukraine
Tonga soa eto amin'ny tranonkalan'ny Sumy Agrarian National University. Azoko antoka fa ho hitanao ao mahaliana be dia be momba ny asa ny oniversite.
Sumy National University Agrarian manana ambaratonga – IV ny fankatoavana. Tsy Mampianatra tena mahafeno fepetra ho an'ny fambolena manam-pahaizana manokana amin'ny fianarana lalina ny teny vahiny sy ny informatika.
Ny mpampianatra za-draharaha mampiasa, anisan'izany ny 48 mpitsabo, mpampianatra sy ny 248 kandidà ny Siansa, mpiara mpampianatra. Ho an'ny firenena sy ny iraisam-pirenena isika fandaharana manofana manam-pahaizana manokana amin'ny fomba fijery ny raharaham-barotra lalana fitantanana amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana endrika tompony. Ny nahazo diplaoma mandray “Master” diplaoma, izay fantatra maneran-tany.
Ny University foana ny zava-bita tsara indrindra sy ny fomba amam-panao, ary tsy tapaka mandroso, dia mba hitady famoronana vaovao dingana ampy fanabeazana sy ny Siantifika asa.
Rector ny Sumy Agrarian National University,
Doctor ny fambolena siansa, mpampianatra,
Akademisiana ao amin'ny National Akademian'ny Siansa Agrarian Okraina
Sumy Agrarian National University dia ambony kokoa amin'ny fananganana fanabeazana ambaratonga – IV ny fankatoavana; dia iray amin'ireo tsara indrindra agrarian anjerimanontolo Okraina. Sumy National University Agrarian naorina tany 1977; ho an'ny 40 taona ny fisiany, efa lasa amin'ny Sumy sampan'ny Kharkiv fambolena Institute atao hoe rehefa V.V. Dokuchaev ny fanabeazana mahery fananganana firenena zava-dehibe.
Sumy National University Agrarian Mampianatra tena mahafeno fepetra ho an'ny fambolena manam-pahaizana manokana amin'ny fianarana lalina ny teny vahiny sy ny informatika. Ny rafitra dia ahitana ny Oniversite 8 fahaizanareo, Institute iray sy dimy kolejy.
Amin'izao fotoana izao pambolena lehibe mpiara-tahiry orinasa sy ny orinasa fanodinana ny Ukraine mila mahay tena-manam-pahaizana manokana, mahay miasa ny teknolojia vaovao. Mpianatra ny Sumy National University Agrarian mahazo ny fahalalana teorika, ary mampiasa azy io amin'ny fomba fanao amin'ny fitarihana ny fambolena sy ny orinasa any Ukraine firenena vahiny izay miara-miasa University.
Ny mpianatra dia manana ny fahafahana tsy manam-paharoa ho any an-tany hafa, ary ny hiasa amin'ny fambolena toeram-piompiana tany Angletera, Danemark, Failandy, Soeda, Frantsa, USA, Aostralia, ny Pays-Bas; izany dia mampitombo fatratra ny matihanina ambaratonga ary manampy azy ireo mba hampiasa amin'ny fitarihana ny fambolena sy ny fanodinana orinasa Okraina.
Misy about 11,000 mpianatra tany amin'ny oniversite. Manana isika 1,000 solosaina seza. Mpianatra sy ny mpampianatra dia manana ny fahafahana hantsaka vaovao momba ny zava-bita vaovao ny siansa amin'ny alalan'ny vaovao iraisam-pirenena Network IINTERNET. Ny solosaina tambajotra maneran-noforonina tao amin'ny University.
Fikarohana ara-tsiansa sy ny asa natao tao 19 fikarohana laboratoara; manana isika 26 specialties ho an'ny mpianatra nahazo diplaoma teny. Research Institute ny Ovy-piompiana tany avaratra-atsinanan'i Ukraine faritra dia naorina tao amin'ny departemantan'i ny zavamaniry-piompiana sy ny famokarana voa-.
Ao amin'ny trano famakiam-boky ny Sumy Agrarian National University misy mihoatra noho ny 500,000 fanontana: siantifika, fanabeazana, Fiction, boky sy gazety fanampiny, e-boky ho lavitra ny fianarana amin'ny fahafahana miditra amin'ny INTERNET.
Manana ny fanabeazana sy ny Siantifika laboratoara (vivarium) fa azo fampiofanana ny mpianatra, izay biby fiompy sy ny akoho amam-borona dia nitandrina, izany dia tahaka ny velona ho an'ny boky fianarana ho avy mpitsabo biby, manam-pahaizana sy ny manam-pahaizana manokana biby fiompy hafa fahaizanareo ny Sumy Nau; ny fampianarana sy ny fanandramana toeram-pambolena tamin'ny faritra iray amin'ny tany 2, 6 arivo hektara, Anisan'ny tany fambolena 2, 3 arivo hektara; andrana saha, izay injeniera-TECHNOlogists asa mampiasa milina ho an'ny fambolena vokatra amin'ny teknolojia vaovao.
Ny oniversite dia ny perla sy ny voninahitry ny Sumy. Educational trano, kianja, laboratoara, tranom-bahiny dia hita amin'ny ankapobeny, madio sy ampy fitaovana tsara faritany. Ny University manana fisotroana kafe sy cantine tamin'ny vidin ambany indrindra ao an-tanàna, ny Club sy ny gyms, izay momba ny 3,000 mpianatra miditra ao ny fanatanjahan-tena ao amin'ny 20 fanatanjahantena fizarana.
Ao ny tanora-entertainment foibe misy faribolana samihafa, fikambanana, kanto Studios, mpankafy vondrona. Isan-taona dia mankalaza ny fifaninanana teo anivon 'ny voalohany-taona ireo mpianatra “Mivory: eto isika!” Vondrona mpankafy ny famoronana vondrona amin'ny manan-karena tantara, lisitra fizahany, ny fomba amam-panao.
Amin'izao fotoana izao ny mpianatra taova governemanta Voalamina isaky ny sampam-pianarana sy eo amin'ny tranom-bahiny; mpianatra’ anjerimanontolo fitantanana dia miasa.
Sumy National University Agrarian Nanjary tena “smithy ny mpiasa” maro fambolena orinasa sy ny andrim-panjakana ny faritra Sumy sy Ukraine. Ny University miavonavona ny ny nahazo diplaoma. Ny sasany amin'izy ireo asa fikarohana momba ny fitondran-, mampianatra ireo mpianatra, fa ny ankamaroany dia hiasa soa aman-tsara ao amin'ny sehatry ny fambolena eto amin'ny firenentsika.
Rector ny oniversite Volodymyr Ivanovych Ladyka, dokotera ny fambolena siansa, mpampianatra, akademisiana ny National Akademian'ny Siansa Agrarian Okraina, ihany koa nahazo diplaoma tamin'ny Sumy Agrarian National University. Amin'ny asany izy, mitandrina ny zava-bita tsara indrindra sy ny fomba amam-panao amin'ny oniversite, ary tsy tapaka mandroso, izy mba hitady famoronana vaovao dingana ampy fanabeazana sy ny Siantifika asa.